Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neZiseko zoNcedo ukuze kuhlolwe uMhloli oncedisayo uMhloli | RayHaber
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraIcandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neziSeko zoNcedo lokuThenga uMhloli oncedisayo
Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neziSeko zoNcedo lokuThenga uMhloli oncedisayo
02 / 12 / 2019 06 Ankara, Ummandla waseMntla Anatolia, Imisebenzi, JIKELELE, ZOMHLATHI, ETURKEY
inkonzo encedisayo kwezothutho kunye nezibonelelo
Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo ziya kuqesha abahloli boMncedisi; I-8 kwiklasi yeeNkonzo zoLawulo Jikelele ziya kuqeshwa kwiCandelo loMphathiswa Wezothutho. Ukuze wenze umsebenzi ovulekileyo kwi-5 (emihlanu) yabahloli boMncedisi, uviwo lokuNgena kwabahloli boMncedisi luya kubanjwa ngokwemiqathango yoMmiselo kwiiNkonzo zokuHlola zeCandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neziSeko.
Uviwo lokungena ngolu hlobo lulandelayo;
IIMFUNO ZEMVIZO ZOKUXELWA 1- ENTRY
a) Ukuhlangabezana neemeko ezichazwe kwiNqaku 657 yoMthetho waBasebenzi baseburhulumenteni uNo. 48
b) Ubuncinci iminyaka emine yemfundo yamabanga aphantsi; Ukuphumelela izidanga kwezomthetho, iiSayensi zezoPolitiko, ezoQoqo, ezoLawulo lwezoShishino, ezoQoqo kunye nezoLawulo lweSayensi kunye nelinye lamaziko emfundo aphakamileyo aneminyaka emine yemfundo yamabanga aphantsi kunye nokwamkelwa ngokulinganayo liBhunga leMfundo ePhakamileyo.
c) Kwizicelo eziza kwenziwa phakathi kwabagqatswa abafumana amanqaku asezantsi e-2018 (amashumi asixhenxe) okanye ngaphezulu ukusuka kuhlobo A lweKPSS P2019 uhlobo lweManqaku oVavanyo lokhetho lwabasebenzi bakaRhulumente (KPSS) olwenziwe nguMlinganiso, uKhetho kunye neZiko lokuBekwa (ÖSYM) kwi48 kunye ne-70; Ukuba kwinqanaba lokuqala le-100 (i-One Hundred) ngokwamanqanaba aphezulu, (ukuba inani labafaki-zicelo lizizalisekisa ngokufanelekileyo iimviwo kwaye kungaphezulu nje kwe-100 ingaphezulu komntu u-100, umgqatswa wokuqala we-100 omiselweyo ngenxa yokuhlelwa kwenqaku lelona nqanaba liphezulu uya kuthathwa kuviwo lokungenela kunye ne-XNUMX. Abaviwa / abaviwa abanamanqaku alinganayo baya kumenyelwa kwiimviwo)
d) Ukungabi phantsi kweminyaka ye-01 njenge-01 / 2019 / 35, (wazalwa u-1 ngoJanuwari 1984 kwaye kamva)
e) Ukuba neempawu kunye neziqinisekiso zoMhloli,
f) Ngokumalunga nemeko yezempilo, ukuya kuzo zonke iindawo zelizwe, ukuba ndikwazi ukusebenza kuzo zonke iimeko zemozulu kunye neemeko zokuhamba, ukuthintela ukuqhubeka komsebenzi wesifo somzimba okanye sokugula kwengqondo okanye ukhubazeko lomzimba kunye nokukhubazeka, (abagqatswa abafanelekileyo ukwenza uvavanyo ngomlomo baya kuthathwa kwizibhedlele eziQeqeshwayo zoqeqesho kunye nophando. Ingxelo yeBhodi yeZonyango iya kucelwa)
g) Ukugqitywa, ukukhululwa okanye ukunqunyanyiswa kwenkonzo yasemkhosini kubagqatswa abangamadoda (Abagqatswa abangamadoda banelungelo lokufumana uviwo ngomlomo kuya kufuneka bangenise isatifikethi sobume basemkhosini.)
h) Ukungazibopheleli kulo naliphi na iziko, (abaviwa abasayiniweyo baya kuthathwa kubafaki-zicelo abanelungelo lokuthatha uviwo ngomlomo.)
i) Ukuthatha iimviwo okokuqala okanye okwesibini,
I-2- ISICWANGCISO SOKUFUNDA NESITHUBA
Abafakizicelo abanqwenela ukuthatha inxaxheba kuviwo lokuNgenela, ukuqala kusuku olulandelayo ukupapashwa kwesibhengezo esisesikweni kwiGazethi yaseburhulumenteni, ngokuxhomekeka ekubeni bayazifezekisa iimeko ezichazwe apha ngasentla, kude kube ngumhla we-16 / 12 / 2019 ngoLwesihlanu;
"Ministry of Transport and Infrastructure Ministry of Iinkonzo Audit Directorate (Block, 6 Floor.) Basic Turayliç Caddesi No: 5, Ikhowudi yeposi: 06338, emeki Çankaya / Ankara / ETURKEY"
Idilesi inokwenziwa ngokobuqu okanye ngeposi ebhalisiweyo. Izicelo ezenziwa ngeposi, umhla 16 / 12 / 2019 kufuneka ufikelele kwidilesi echazwe ngolwesiHlanu ngaphambi kokuphela kweeyure zomsebenzi. Izicelo ezingazithunyelwa kwi-Ofisi kaMongameli ngenxa yokulibaziseka kweposi kunye nezinye izizathu okanye ezingafezekisiyo iimeko ezichazwe kwisibhengezo aziyi kulungiswa.
Uluhlu lwabo banelungelo lokuthatha uviwo lokungena olubhaliweyo lungafumaneka kwiwebhusayithi yeNkonzo ( uab.gov.tr/duyuru on).
Abaviwa baya kufaka isicelo soviwo olubhaliweyo;
a) Ifom yesicelo somgqatswa,
b) Uxwebhu lweziphumo zeKPSS (ixesha lokuqinisekisa kunye nokuqinisekisa uviwo kunye nokutshekisha kuya kwenziwa.),
c) Ikopi yokuqala okanye eqinisekisiweyo yediploma yeZiko leMfundo ePhakamileyo okanye isiqinisekiso
d) Iifoto zencwadana yokundwendwela ze-6 iziqwenga ezithathwe kwiinyanga ezi-1 (ezintandathu) ezidlulileyo,
e) Ikopi yesazisi kunye nesampula yabantu ababhalisiweyo
Bahlanganisa. Ifomu yesicelo somgqatswa iqhotyoshelwe kwisibhengezo esapapashwa kwiwebhusayithi yeNkonzo. Abaviwa banoxanduva lokuchaneka kwamaxwebhu angeniswe kwizicelo zabo. Abaviwa abathi kamva bafumanise ukuba abazifezekisi iimfuno zesicelo, abanakubanga malungelo. Ukuba amaxwebhu afunyenwe enobuqhetseba okanye ubuqhetseba, inkqubo yezomthetho eyimfuneko iya kuqaliswa ngokuchasene nomgqatswa.
I-3-UMHLA we-Exam KUNYE NOBANDLA
UViwo lokuNgenela luya kubanjelwa e-Ankara ngamanqanaba amabini, okokuqala libhalwe kwaye emva koko lube ngumlomo kwinkqubo yovavanyo oluninzi oluninzi.
Icandelo elibhaliweyo loviwo liya kubanjelwa kwi-29 / 12 / 2019 ngeCawa e-10: 00 “Ankara Yıldırım Beyazıt iYunivesithi ye-Law 15 kaJulayi yokwakha i-Ayvalı Mah. I-Halil Sezai Erkut Cad. 150. Isitrato Etlik / Ankara ”kunye nabagqatswa abaza kufaneleka ukuba babhale iimviwo ezibhaliweyo baya kwaziswa ngomhla we-18 / 12 / 2019 kwiwebhusayithi yeCandelo loMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo (uab.gov.tr/duyurular) kwidilesi ye-XNUMX / XNUMX / XNUMX. iincwadi zokungena kweli phepha. Ngaphandle kwalokhu, akukho saziso siya kunikwa abafaki-zicelo ngokubhala uviwo lokungena olubhaliweyo.
Kuya kufuneka abaviwa bathathe uviwo olubhaliweyo ngoxwebhu lwabo lokubhalisela (uab.gov.tr/duyurular), kunye nencwadana yabo yesazisi enenombolo yesazisi okanye ipasipoti yabo enexesha elisemthethweni lokusetyenziselwa ukuzazisa.
Amagama, umhla kunye nendawo yovavanyo lomlomo ziya kwaziswa kwiwebhusayithi yeNkonzo (uab.gov.tr/announcements).
I-4- IFOMU NEMIBA YOKUVELA KWEEMVIYO
Uviwo olubhaliweyo luya kubanjwa kunye ne-5 (ezintlanu) ngokukhetha inkqubo yovavanyo oluninzi oluninzi. Kwimviwo ebhaliweyo, abaviwa baya kubuzwa imibuzo emashumi mabini anantlanu, emine iya kuba ngamanqaku amane emibuzo yeemithetho, ezoqoqosho, ezemali nezemali, kunye ne-20 (amashumi amabini) ziya kuba zintlanu kwiqela ngalinye lovavanyo lwenkobe. Ixesha lokubhalwa lilonke liyimizuzu ye-120.
Izifundo zoviwo olubhaliweyo zidweliswe ngezantsi.
a) Umthetho woMgaqo-siseko,
b) Imigaqo ngokubanzi yoMthetho woLawulo, iiJaji zoLawulo, uMbutho woLawulo,
c) UMthetho woLwaphulo-mthetho (Imigaqo ngokubanzi kunye nolwaphulo-mthetho ngokuchasene noRhulumente),
c) Imithetho yaseburhulumenteni (Imigaqo ngokubanzi kunye namalungelo okwenyani),
d) Umthetho wezinto eziMiselweyo (Imigaqo ngokubanzi),
e) UMthetho wezoRhwebo (uRhwebo ngezoRhwebo, iiNkampani kunye noMthetho weSixhobo seZinto eziXhasi),
f) UMthetho wezoRhwebo zaseLwandle (Imigaqo ngokubanzi, iMithetho eQhelekileyo yokuLawulwa kweeLwandle, iMeko yeZomthetho kunye neMimmiselo yeZiko laseTurkey, iiTekhontrakthi zeZithuthi, iiKhontrakthi zezoThutho zaBakhweli),
g) Umthetho Wezabasebenzi (IMigaqo-siseko gabalala, UMthetho wabasebenzi, iiMvumelwano zabasebenzi eziDibeneyo),
f) UMthetho oSebenzayo kunye nokuGqithisa (Imigaqo ngokubanzi),
b) I-Macro Economics,
c) Uqoqosho lwehlabathi,
c) Uqoqosho lwezoqoqosho,
a) Umgaqo-nkqubo wezeziMali,
b) Ingeniso yoluntu kunye neNkcitho,
c) Imigaqo ngokubanzi yomThetho weRhafu waseTurkey,
a) Ubalo-mali ngokubanzi
b) Uhlalutyo lwephepha lebhalansi kunye neendlela zobuchule
c) Iakhawunti yeNtengiso,
5. IPHEPHA LOLWIMI:
Uviwo lokungenela; ebhaliweyo nangomlomo. Uvavanyo olubhaliweyo luya kuba lukhetho oluninzi. Abenzi-sicelo abangaphumelelanga kuvavanyo olubhaliweyo abayi kuba nelungelo lokuthatha inxaxheba kuvavanyo lomlomo. Ibakala elipheleleyo kwiimviwo zokungenela yi-100, eyahlukileyo kumaqela ebhalwayo kunye nolo kuphela kwiimviwo zomlomo. Ukwenzela ukuthathwa njengophumelele kwiimviwo ezibhaliweyo, amanqaku ngamanqaku afunyenwe kumaqela eemviwo ezibhaliweyo ngaphandle kweelwimi zasemzini akufuneki ukuba abe ngaphantsi kwe60 kwaye umndilili akufuneki ube ngaphantsi kwe70. Ibakala lolwimi lwangaphandle alizukuqukwa kumndilili kwaye ziya kuthathwa njengesizathu sokukhetha. Amanqaku ovavanyo lokungenela abalwa ngokuthatha umndilili we-arithmetic yenqaku lokuvavanywa ngomlomo kunye nenqaku loviwo lokubhalwa kwabafundi abaphumelele kwiimviwo zomlomo. Ekwazini inqanaba lempumelelo yabagqatswa, ukuba amanqaku eemviwo zokungena alingana, umviwa onamanqaku aphezulu obhalwayo, kwaye ukuba amanqaku ovavanyo lokungena namanqaku ovavanyo abhaliweyo alingana, umviwa ofake amanqaku e-KPSS uya kuba kwindawo ephambili. Amanqaku e-70 okanye ngaphezulu kwiimviwo zokungenela awathathelwa ingqalelo njengelungelo elifunyenwe ngabagqatswa abangaphandle kwenani labasebenzi abaza kuqeshwa.
Umviwa we-20 uya kumenywa ukuba aqalise uviwo ngomlomo ukusuka kumfundi kwelona nqanaba liphezulu ukusuka kwiimviwo ezibhaliweyo. Abaviwa abanenqaku elifanayo nelomfundi wokugqibela oza kumenywa baya kumenyelwa kwiimviwo zomlomo.
Amagama abaviwa abakufaneleyo ukuthatha uviwo ngomlomo, umhla kunye nendawo ekubhalelwa kuyo uvavanyo ngomlomo (uab.gov.tr/duyuru on).
Kwimviwo yomlomo, abaviwa; Ngokubanzi, inqanaba lolwazi lwensimi kunye nobukrelekrele, isantya sokudluliselwa, ukukwazi ukubonisa, ukuqiqa amandla, ukulunga, amandla okumela, indlela yokuziphatha kunye nokufaneleka emsebenzini, ukuzithemba, amandla okukhohlisa kunye nentembeko, ubuchule ngokubanzi nenkcubeko ngokubanzi, ukuvavanywa kokuvuleleka kwinkqubela phambili yenzululwazi nezobugcisa.
Ukwenzela ukuthathwa njengophumeleleyo kwiimviwo zomlomo, umndilili we-arithmetic of the scores enikezwe ngusihlalo ngamnye wokuvavanya kunye namalungu ngaphezulu kwenqaku elipheleleyo le-100 akufuneki ukuba abe ngaphantsi kwe-70.
Amanqaku ovavanyo lokungena akufuneki abe ngaphantsi kwe-70 ukwenzela ukuba athathelwe ingqalelo njengovavanyo lomvavanyi ongumncedisi.
Uluhlu lwabantu ababambeleyo kunye nenombolo yentsusa kunye nenani lokuqala lezinto ezibhaliweyo nezomlomo zovavanyo olungenayo ziyafumaneka kwiwebhusayithi yoMphathiswa.uab.gov.tr/duyuru onkwaye iziphumo zeemviwo zokungenela ziya kwaziswa abaviwa ngeleta ebhalisiweyo.
6) EMINYE IMIBA
ingcaciso engaphezulu kunye namanye amaxwebhu afunekayo ukulungiselela uviwo (ukusuka uab.gov.tr/duyuru's) idilesi, i-Audit Services Department of the Ministry of Transportation kunye Infrastructure (0312) 203 10 84- (0312) zingafumaneka kule inombolo yefowuni 203 18 81.
Abaviwa banokungenisa inkcaso zabo kwimibuzo yeemviwo okanye kwiziphumo zoviwo kwiintsuku ze-7 (ezisixhenxe) emva kokubhengezwa kweziphumo zoviwo. (Ikhulu iTurkey Lira), irisithi eyamkelweyo ngokufaka imali yokufaka isikhalazo, umxholo wokuchasa kunye nedilesi yonxibelelwano ebhalwe ngokucacileyo kwisikhalazo kwi-Ofisi yezoThutho kunye neeNkonzo zoVavanyo lweziSeko.
Izichaso ezenziwe emva kokuphela kwexesha kunye nezicelo ezingenayo inombolo yesazisi yomenzi-sicelo, utyikityo, idilesi kunye nerisithi yebhanki aziyi kuthathelwa ingqalelo.
USekela-Mlawuli-Jikelele weCandelo loMphathiswa Wezothutho…
Udliwanondlebe loMhloli oNcedisayo ovela kuThutho lwe-TCDD
Umhloli oncedisayo we-TCDD wamemezela abaphumeleleyo boviwo
Wayesebenza njengoMhloli oncedisayo kwi-TCDD AŞ
Icandelo likaSekela-Mphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo
UMphathiswa wezoThutho iSicwangciso seMatriki sikaZwelonke sokuThuthwa
TCDD Transportation Inc. I-9 iya kuthatha umhloli oncedisayo
Umhloli oncedisayo wezothutho we-TCDD!
IHandover kwiCandelo loMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo…
Isicwangciso sokuSebenza semihla ngemihla se-100 kwi-Ulaştırma
UMphathiswa wezothutho kunye nezibonelelo
Ukusuka kwiCandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neZiseko ezinguMda ukuya kwiiNqanawa zeNqanawa…
Ukukhutshwa koMhlaba kwe-Februwari kuMphathiswa wezothutho kunye nezibonelelo
I-Istanbul Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo…